Home Wararka Wasiir Fiqi oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Gobolka mudug
Xaaladda deegaanada Bacaadweyne iyo Camaara oo ay dagaallo ka dheceen ayaa degen.
Dagaalkan ayaa dhexeeyey ciidamada dowladda, kuwa Galmudug iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah, iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Warar laga helayo goobaha caafimaadka iyo dad ku sugan deegaano u dhow goobaha shaley lagu dagaalamey ayaa waxa ay sheegeen in khasaare nafeed uu ka dhashey dagaalka.
Wararka aayaa sidoo kale sheegaya in ku dhawaad 20 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi, dhaawacuna uu intaas ka badan yahay.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in khasaaro lixaad leh ay gaarsiiyeen dagaalameyaasha Al-Shabaab, isagoona sheegay in ku dhawaad 50 dalaame ay ku dhaawaceen dagaalka.